Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Cetirizine + Pseudoephedrine ကိုမျက်ရည်ကျခြင်း၊ နှာရည်ကျခြင်း၊ နှာပိတ်ခြင်း၊ မျက်စိနှင့်နှာခေါင်းယားခြင်း၊ နှာစေးခြင်းစတဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာများအတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီဆေးမှာcetirizine နဲ့ pseudoephedrineဆိုပြီး ၂မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ cetirizine ဟာဟစ်စ်တမင်းဆန့်ကျင်ဆေးဖြစ်ပြီးဓါတ်မတည့်ချိန်မှာထွက်လာတဲ့ ဟစ်စ်တမင်းလို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတမျိုးကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ pseudoephedrineကတော့ နှာပိတ်ပျောက်ဆေးဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းအတွင်းကသွေးကြောတွေကိုကျဉ်းစေပြီးရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ နှာပိတ်ခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်။
ဒီဆေးမှာpseudoephedrine အများအပြားပါဝင်တာကြောင့် အသက်၁၂နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်စရာမလိုဘဲ မိမိဖာသာဝယ်ယူသောက်သုံးနိုင်တဲ့ဆေးဖြစ်ပြီးမသုံးစွဲခင်မှာဆေးဗူးမှာပါတဲ့ အညွှန်းစာတွေကိုသေချာဖတ်ရပါမယ်။ သိလိုတာတွေရှိရင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းပါ။ ဒီဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အခါ
အစာနဲ့ဖြစ်စေ၊ အစာမပါဘဲဖြစ်စေဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ် သောက်ပေးရပါတယ်။
ဆေးတောင့်ကိုချေခြင်း၊ ဝါးစားခြင်း မလုပ်ရပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် အာနိသင်အားလုံးတပြိုင်တည်းပေါ်လာပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆေးပြားရဲ့အလယ်မှာမျဉ်းကြောင်းလေးမပါရင်၊ ဆရာဝန်နဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူက ညွှန်တာမဟုတ်ရင် ဆေးကို၂ခြမ်းမဖြမ်းပါနဲ့။ ဆေးသာက်ရာမှာ ကြိတ်ဝါးခြင်းမလုပ်ဘဲ တခါတည်းမြိုချရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါမသက်သာရင်၊ ပိုဆိုးလာရင်၊ ဖျားရင် ဆရာဝန်ကို ဖွင့်ပြောပါ။
Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Cetirizine + Pseudoephedrine ကိုအခန်းအပူချိန်မှာတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့အောင်၊ စိုစွတ်မှု မရှိအောင် သိမ်းဆည်းတာဟာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းခြင်းမဖြစ်ရအောင် ရေချိုးခန်းတွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရပါ။ Cetirizine + Pseudoephedrine ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းခြင်းမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Cetirizine + Pseudoephedrine ကိုအိမ်သာတွင်းထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့ရင်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားရင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Cetirizine + Pseudoephedrine မသောက်ခင်မှာCetirizine ဒါမှမဟုတ် Pseudoephedrineကိုဖြစ်စေ၊ hydroxyzine (သို့) levocetrizineကိုဖြစ်စေဓါတ်မတည့်တာရှိရင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုဖွင့်ပြောပါ။ တခြားဆင်တူတဲ့ phenylephrine ပါတဲ့ နှာစေးပျောက်ဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာရှိရင်လည်းဖွင့်ပြောပါ။ ဒီပစ္စည်းမှာဓါတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ တခြားပြသနာတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုသိရအောင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
ဆေးမသုံးခင်မှာမိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို (အထူးသဖြင့် ရေတိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ၊ သိုင်းရွိုက်အလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါစတဲ့ပြသနာတွေ ရှိရင်) ဆရာဝန် (သို့) သူနာပြုကိုဖွင့်ပြောပါ။
ဒီဆေးဟာမူးဝေအိပ်ငိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးသောက်ထားချိန်မှာယာဉ်မောင်းခြင်း၊ စက်ယန္တရားမောင်းနှင်ခြင်းနဲ့ နိုးနိုးကြားကြားလုပ်ရမယ့် လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အရက်သောက်တာလျှော့ပါ။
အသက်ကြီးသူတွေဟာဒီဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုပိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ပုံမှန်မခုန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ဆီးသွားခက်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်မှာ တကယ်လိုအပ်မှသာသုံးသင့်ပါတယ်။ သန္ဓေသားကိုထိခိုက်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကိုသိရအောင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။ ဒီဆေးဟာမိခင်နို့ထဲ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Cetirizine + Pseudoephedrine ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာအသုံးပြုရင် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေ မရှိပါဘူး။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းကျိုးများနဲ့ ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Cetirizine + Pseudoephedrine ဆေးဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များမှာ ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့် Cရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။)အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များမှာ ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မူးဝေခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊အိပ်မပျော်ခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီပြသနာတွေ ပျောက်မသွားရင်၊ ပိုဆိုးသွားရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဒီဆေးကိုပေးရခြင်းဟာဆိုးကျိုးထက် ကောင်းကျိုးကပိုများတယ်လို့ ယူဆလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုသုံးတဲ့ လူအများမှာတော့ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မကြုံရပါဘူး။ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ပုံမှန်မခုန်ခြင်း၊ ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်းစိတ်တိုလွယ်ခြင်းဂနာမငြိမ်ခြင်းစသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ၊ အားနည်းခြင်းစတာတွေဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများကြောင့် ဆေးရဲ့အာနိသင်ပြောင်းသွားနိုင်ပြီးဆိုးရွားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ စာထဲမှာတော့ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုအားလုံး မပါဝင်ပါဘူး။ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်းလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပေးဘဲဆေးကိုစသောက်ခြင်း၊ ရပ်ပစ်ခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများမလုပ်ပါနဲ့။
ဒီဆေးနဲ့အတူ MAOI အုပ်စုဝင်ဆေးတွေကို သောက်သုံးခြင်းဟာဆိုးရွားပြီးသေဆုံးနိုင်ခြေအထိ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးသောက်နေချိန်မှာisocarboxazid, linezolid, methylene blue, moclobemide, phenelzine, procarbazine, rasagiline, safinamide, selegiline, tranylcypromine စတဲ့ MAOI အုပ်စုဝင်ဆေးဝါးများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒီဆေးမသောက်မီနဲ့ သောက်ပြီး ၂ပတ်အထိ ဒီဆေးမသောက်ပါနဲ့။ ဘယ်အချိန်မှာဆေးကိုစသောက်ရမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာရပ်ရမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။
အိပ်ငိုက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ ဘိန်းပါတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး (codeine, hydrocodone)၊ အရက်၊ ဆေးခြောက်၊ အိပ်ဆေးစိတ်ငြိမ်ဆေး (alprazolam, lorazepam, zolpidem)၊ ကြွက်သားများတောင့်တင်းမှု လျော့စေသောဆေးများ (carisoprodol, cyclobenzaprine)၊ အခြားဟစ်စ်တမင်းဆန့်ကျင်ဆေးများ (chlorpheniramine, diphenhydramine) စတာတွေသုံးစွဲနေရင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများကိုဖွင့်ပြောပါ။
မိမိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးများအားလုံးရဲ့ အညွှန်းစာတွေကိုသေချာဖတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် နှာစေးချောင်းဆိုးရာမှာသုံးစွဲတဲ့ဆေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ငိုက်စေဆဲ့ဓါတ်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးတွေကိုဘေးကင်းစိတ်ချရအောင် ဘယ်လိုသုံးစွဲရမယ်ဆိုတာ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ အရေပြားပေါ်လိမ်းရတဲ့ တခြားဟစ်စ်တမင်းဆန့်ကျင်ဆေးများနဲ့ (ဥပမာdiphenhydramineခရင်မ်၊ လိမ်းဆေးဆီ၊ ဖြန်းဆေး) တွဲမသုံးပါနဲ့။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပိုမိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Cetirizineဟာ hydroxyzine, levocetrizineစတာတွေနဲ့ အမျိုးအစားဆင်တူတဲ့အတွက် Cetirizineသုံးစွဲတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဆေးတွေ မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
ဒီဆေးဟာဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြေတချို့ကိုမှားယွင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဓါတ်မတည့်မှု အရေပြားစစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Cetirizineသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် ဓါတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများနဲ့ ဆရာဝန်များကို ဖွင့်ပြောပါ။
Cetirizine + Pseudoephedrine ဟာသင်ယခုသောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်းလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Cetirizine + Pseudoephedrine ဟာအစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cetirizine + Pseudoephedrine ဟာသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရောဂါများရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆေးတပြား (၅မီလီဂရမ်-၁၂၀မီလီဂရမ်) ကိုသောက်ဆေးအနေနဲ့ တနေ့၂ကြိမ် သောက်နိုင်ပါတယ်။
Creatinineစွန့်ထုတ်မှုနှုန်းတမိနစ်ကို ၃၀မီလီလီတာအောက်လျော့နည်းရင် တနေ့ကိုဆေးတပြားပဲသောက်သင့်ပါတယ်။
Pseudoephedrineပါတာကြောင့် သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးအရနည်းသောရောဂါ၊ မျက်စိရေချိန်တက်ခြင်း၊ သိုင်းရွိုက်အလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်မကောင်းခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းစတာတွေဖြစ်ရင် အထူးသတိပြုသုံးစွဲရပါမယ်။ လက်တွေ့ကုသရာမှာအိပ်ငိုက်မှုတွေကြုံရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ကားမောင်းရာမှာ၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ စက်ယန္တရားများမောင်းနှင်ရာမှာအထူးသတိပြုရပါမယ်။ အရက်နဲ့တွဲပြီးသုံးစွဲမိရင် သတိရှိခြင်း၊ နိုးကြားခြင်းများလျော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဆေးကိုဝါးမစားဘဲ တပြားလုံးသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ကြီးကနေ မိမိဖာသာဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ချောင်းဆိုးအအေးမိပျောက်ဆေးတွေကို ၂နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာမသုံးဖို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ၂နှစ်အောက်ကလေးတွေအတါက် သင့်တော်တဲ့ဆေးပမာဏကိုမလေ့လာထားပါဘူး။ ဆိုးရွားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံနိုင်ပြီးသေဆုံးခြင်းအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အုပ်ထိန်းသူများအနေနဲ့ချောင်းဆိုးအအေးမိပျောက်ဆေးတွေကိုညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲသုံးစွဲဖို့၊ တူတဲ့ဆေးတွေထပ်ပေးမိလို့ ဆေးပမာဏများသွားတဲ့အခါ ဆေးလွန်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တာကိုသိနေစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Creatinineစွန့်ထုတ်မှုနှုန်းတမိနစ်ကို ၇ မီလီလီတာအောက်လျော့နည်းတဲ့ ကျောက်ကပ်ဆေးသူတွေမှာတနေ့ကိုဆေးတပြားသောက်ဆေးအနေနဲ့ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Cetirizine + Pseudoephedrine (စီထရင်ဇင်း + ဆူဒိုဖီဒရင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Cetirizine + Pseudoephedrine ကိုဆေးပြားအနေနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်
Cetirizine + Pseudoephedrine ဆေးကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာသာသုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။
etirizine-Pseudoephedrine ER. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-21775/cetirizine-pseudoephedrine-oral/details. Accessed January 12, 2018.